दोस्रो विश्वयुद्धताका कस्तो खाना बन्थ्यो ? थाहा पाउनुहोस् - Kendra Khabar
दोस्रो विश्वयुद्धताका कस्तो खाना बन्थ्यो ? थाहा पाउनुहोस्
२०७५, २९ कार्तिक बिहीबार ०५:०८
अभाव र आवश्यकताले मानिसलाई जे गर्न पनि सिकाउदो रहेछ । पेटको आगो निभाउन खाना नै अन्तिम उपाय हो । जब पेट टन्न हुन्छ त्यस पछि न सबै काम गर्न सकिन्छ । हामी जे गर्छौं अनि जति दुख गर्छौं खालि यहिँ पेटकै लागि गर्छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
हरेक देशमा कुनै न कुनै परम्परागत भोजन खास अवसरमा बनाइन्छ । भोजन हरेक देशको पहिचानसंग जोडिएको हुन्छ । मात्रै यति फरक छ, कुनै भोजन खुसीको माहोलमा बनियो कुनै दुख र संकटको अवस्थामा बनियो । यसो भनौ नयाँ भोजन बनाउन अभावले सिकायो ।
प्रसङ्ग जोडौं दोश्रो विश्वयुद्धको, दोश्रो विश्वयुद्धताका खानाको बहुत कमी हुन्थ्यो, मानिसहरु बचेको खाना सम्हालेर राख्थे र फेरि त्यसैबाट नयाँ भोजन तयार गर्थे । यस्ता भोजनका अनगिन्ती रेसिपी उपलब्ध छन, जसको बारेमा किताब पनि लेखिएका छन् । आज हामी तपाइँलाई यस्तै भोजनबारे जानकारी दिँनेछौं ।
द व्हैकी केक
सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं द व्हैकी केकको । भनिन्छ, दोस्रो विश्व युद्धका समयमा अमेरिकीहरुले यो केक बनाउन सिकेका हुन् ।
सामान्य अवस्थामा केक मैदा, दूध, मक्खन, अण्डा जस्ता चिजबाट तयार गरिन्छ । तर व्हैकी केकमा भेजिटेबल ओयल, पिठो र चीनीमात्र प्रयोग हुन्छ । साथमा बेकिंग सोडा पनि मिलाइन्छ ।
केक इतिहासकार लारा शैपिरोले यो केक बनाउने तरीक़ा निकै सामान्य भएको बताइन् । तर, मानिसहरुले यो केक बनाउन युद्धका समयमा सिकेका हुन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
हुन सक्छ घरमा भएका समानबाट महिलाहरुले यो केक बनाउ सिकेका हुन सक्छन् । तर, यो केक बनाउन जुन ढंगले थोरै सामानको प्रयोग हुन्छ त्यो कारणले अनाजको कमी भएकाले यस्तो केक बनाउन सिकेको हुनसक्छ ।
यस्तै किसिमको अर्को भोजन हो मोक गूज । जसलाई दोस्रा विश्व युद्धको खानाको रेसिपीमा समावेश गरिएको छ ।
अंग्रेजीको लगभग हज़ार वर्ष पुरानो कुकरीको किताबमा यसको चर्चा गरिएको छ । यो भोजनमा सेकिएको मासुको प्रयोग हुन्छ । तर, १७४७ मा हाना ग्लास नामकी लेखिकाले आफ्नो किताब द आर्ट ऑफ कुकिंगमा यो भोजनमा बंगुरको मासु प्रयोग हुने लेखेकी छन् ।
१८९७ मा पत्रिका हल डेली मेलमा यो भोजन बनाउने तरिकाबारे लेखिएको थियो । यसमा आलु र ससेजको प्रयोग हुने बताइएको थियो ।
यो भोजनको उद्देश्य सामान्य खर्चमा मिस्ठान्न भोजन बनाउने हो । तर, यस्तो उद्देश्य थियो भने यसमा मासुको प्रयोग किन भयो ? यसको जवाफ भने भेटिएको छैन । चीनमा यो भोजन अँझै पनि बन्छ । तर मासुको सट्टा सोयाविन प्रयोग गरिन्छ ।
दोस्रो विश्व युद्धका धmममा जर्मनीको कब्जा रहेको यूनानको राजधानी एथेन्समा हालत अँझ खराब थियो । २०११ मा ग्रीस इतिहासकार एलेनी निकोलाइडू एक किताब लिखे ‘स्टारविंग रेसिपी’ ।
यस किताबमा ती भोजनको चर्चा छ जुन युद्धका क्रममा यूनानका मानिसहरुले अपनाएका थिए । यूनानका पत्रिकामा पनि यसको चर्चा भएको पाइन्छ । यो त्यो बेला थियो जति बेला मानिसहरु भोकले मरिरहेका थिए ।
केही रेसिपीमा त जुन चिज खाइन्छ विस्तारै चपाएर खान सकियोस किनकी पेटमा खान थोरै जाओस र भोक मरोस भन्नेमात्र लेखिएके छ ।
भोकमरीका दिनको खाना
निकोलाइडोले आफ्नो किताब प्रकाशित गरेपछि द गार्जियन पत्रिकाले भोकमरीका दिनको एक अर्को खानाको नाम उल्लेख गर्यो । यो रेसिपी यस्तो मीटबल्सका बारेमा थियो जसमा मीटको प्रयोग हुँदैन ।
बरु प्याज, मसाला पिठोको उपयोग हुन्छ । यसलाई अलि स्वादिलो बनाउन यसमा अण्डाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कुनै समस्याग्रस्त अवस्थामा बनाइएका रेसिपी हालत ठिक भए पनि उपयोग गरिन्छन् । सायद कम खर्चमा यी खाना बन्ने भएकाले यस्तो भएको हुनसक्छ ।
यसका साथै जुन देशमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसैको उपयोग धरै गरिन्छ ।उदाहरणका रुपमा भारतमा आलूको रुपमा लिन सकिन्छ । आलू सायद सबैभन्दा धेरै किसिमले भोजन गर्न सकिने कृषि उत्पादन हो ।
यस्तै गाजर केक लण्डनमा निकै लोकप्रिय छ । यो रेसिपी संकटका अवस्थामा भने आएको होइन । तर, दोस्रो विश्व युद्धका अवस्थामा यसको प्रयोगमा व्यापक जोड दिइएको थियो । किनभने यहाँ गाजर निकै उत्पादन हुन्छ ।
आजभोली पनि जब गाजरको मौसम हुन्छ, यहाँ खानाको टेबलमा कुनै न कुनै रुपमा गाजर उपस्थित हुन्छ । कहिले सलाद त कहिले तरकारीका रुपमा । कहिले भने मिस्ठान्न गाजरको हलुवा ।
पुरानो भनाई छ आवश्यकता नै आविष्कारको जनी हो । मुस्किल समयमा बनाइएका खानपान यो भनाईलाई पक्का पुष्टि गर्छन् ।